Global Voices teny Malagasy · 9 Novambra 2015
Tantara tamin'ny 09 Novambra 2015
Azia Afovoany sy Kaokazy09 Novambra 2015
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Novambra 2015
Ny dokambarotra mampifamadika ny lahy ho vavy nataon'ny Shiseido
Japana09 Novambra 2015
Namokatra dokambarotra mampifamadika ny lahy ho vavy izay nahafanina mpijery ny orinasa Japoney mpamokatra fitaovana fikojakojana tarehy.
Mozika no lalana nivoahan'ity vehivavy karana ity hahaleotena ara-bola
Azia Atsimo09 Novambra 2015
Tritha Sinah no mpitarika ny Tritha Electric. Ny nahalehibe azy tany Kolkata no nilazany fa ny mozika no lalana nandehanany hananany fahaleovantena ara-bola sy fanafahana.
Nandefasan'ny Tambajotran-tsosialy malaza indrindra ao Rosia hafatra manokana avy amin'ny governemanta ny mpiserasera miisa 20.000
Eoropa Afovoany & Atsinanana09 Novambra 2015
Nolazain'ny Vkontakte fa mba hitany voafangitra avokoa ireo mpiserasera rehetra nanao zavatra vao haingana tao Ejipta, nifandray tamin'izy ireo tamin'ny anaran'ny governemanta rosiana. “Tsy misy ny fikendrena manokana fanampiny,”
Mamokatra Ny Adin'i India Amin'ny Tsy Fanjarian-tsakafo Manjo Ny Ankizy
Fanjakana maro ao India no miady manohitra ny tsy fanjarian-tsakafo, efa am-polo taona maro. Mampiseho fivoarana tsara sy fahombiazan'ireo fandaharanasa isankarazany ny tarehimarika ofisialy, saingy mbola betsaka ihany ny tokony hatao.
Netizen Report (Tatitry Ny Mpisera Anaty Aterineto): Mitady Vaha-olana Amin'ny Fitsipiky Ny Angon-kevitra Ao Amin'ny Vondrona Eoropeana Ny Kaompanian'ny Teknolojia Amerikana Aty Aorian'ny Tontolon'i Snowden
Eoropa Andrefana09 Novambra 2015
Mamoaka ny lisitra maintin'ny Aterineto amin'ny fomba fanao Rosiana i Okraina, navotsotr'i Kiobà ilay mpanakanto-bilaogera "El Sexto" rehefa notànana 10 volana an-tranomaizina, ary nogadrain'i Bahrain noho ny fanompàna ny mpanjaka i Zainab Al-Khawaja.